Jubbaland oo Al shabaab ku sifeesay siyaasiyiinta ka soo horjeeda Axmad Madoobe – Somali Top News
Jubbaland oo Al shabaab ku sifeesay siyaasiyiinta ka soo horjeeda Axmad Madoobe
August 24, 2019 Somali Top News	0 Comments Jubbaland oo Al shabaab ku sifeesay siyaasiyiinta ka soo horjeeda Axmad Madoobe
Taliyaha Ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ee Gobolka Gedo ee Jubaland Col. Cabaas Ibraahim Gureey oo la hadlayey dad shalay isugu soo baxay Degmada Ceelwaaq ayaa waxa uu ka hadlay Xaaladda Siyaasadeed ee Jubbaland, iyo waxa laga yeelayo dadka kasoo horjeeda Axmed Madoobe
Col. Cabaas Ibraahim Gureey, oo ay aad isugu dhow yihiin Axmed Madoobe, ayaa shacabka Gobolka Gedo ugu baaqay in ay taageeraan Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) oo khamiistii lagu doortay Doorasho ka dhacay Magaalada Kismaayo.
Taliye Cabaas ayaa fagaare ka sheegay in Axmed Madoobe uu yahay Hogaamiye waxqabad muuqda u sameeyay dadka Jubbaland, sidaas awgeed uu mudan yahay in la taageero.
Dadka kasoo horjeedo Axmed Madoobe waxa uu ku sifeeyay in ay lamid yihiin Al-Shabaab, isla markaana ay ula dagaalami doonaan si Shabaab la mid ah, sida uu hadalka u dhigay.
“Waa waajib in aan taageerno, tan kale waxa aan idiin sheegayaa, Axmed Madoobe ma ahan kuwa Laptop-ka ku hubeysan, ma ahan kuwa Baasaboorka Ajnabiga wata, mana ahan kuwa Qurbo joogta ee waa nin Dalka usoo halgamay, Ninkii maanta aan dooneen waa Al-Shabaab, dagaal ayaa nalaga dhaxeeyo” ayuu Yiri Col. Cabaas Ibraahim Gurey.
Isku soo bax ka dhacay Degmada Ceelwaaq oo ay ka qaybgaleen mas’uuliyiin katirsan Maamulka Degmada iyo Saraakiisha Ciidamada waxa uu isku badalay mid rabsho kusoo dhamaaday, kadib markii dadkii ka qaybgalayay qaarkood ay kasoo horjeesteen Axmed Madoobe.
Haweeney ayaa la sheegayaa in ay ku geeriyootay kadib markii rasaas lagu furay dadkaan ka qaybgalay isku soo baxa ka dhacay Ceelwaaq ee foodada isku badalay.
← The warlord who became Mogadishu mayor
Ahlu-Sunna oo xukun ku fulisay dad geestay fal kufsi ah →
Madaxweynaha Jubbaland oo ku celiyay baaqiisii ahaa wadahadal iyo heshiis
October 12, 2019 Somali Top News 0
Ra’isul wasaare Khayre oo soo geba gebeeyey la xisaabtankii wasiirada
Faah-faahino ka soo baxaya dagaal culus oo dhexmaray ciidanka dowladda iyo kuwa Al shabaab
August 8, 2019 Somali Top News 0